SIDA LOO KEYDIYO DABACASAHA BANGIYADA XILLIGA JIILAALKA: SIFOOYINKA HABKAN, IYO SIDOO KALE KAYDINTA SANDUUQYADA LEH FILLERS KALA DUWAN - KHUDRADDA
Sida loo ilaaliyo karootada dhalooyinka iyo sanduuqyada jiilaalka. Talo-siinta Beeraha
Waxaa jira mar kasta oo karootada cusub ah oo ku yaal gabbaadyada xilliga jiilaalka. Waxay ahayd iyada oo bixiya liiska miisaanka jiilaalka oo leh waxyaabo kala duwan oo waxtar leh. Waxaa lagu ridaa maraqa, saladhka, saxanka dhinaca iyo xitaa ku daray macmacaanka macaan.
Haddii aad leedahay dhul beereed ama aad iibsato tiro badan oo karootada ka hor horey jiilaalka, halka ay weli tahay raqiis, waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo kaydiyo si sax ah. Haddii shuruudaha habka ama kaydinta loo doorto si qalad ah, dalagga gu'ga ah ma noolaan doono jiilaalka isla markaaba si dhakhso ah ayuu u sii xumaanayaa.
Carrot wuxuu leeyahay cufan, qaab adag iyo maqaar khafiif ah. Way adagtahay, waa ka sii fiican iyo waqti dheer waxa lagu kaydin doonaa. Sidaa darteed, ka hor inta aan la dooran habka kaydinta, kala sooc dabacasaha adag oo adag oo ka soo baxa dalagyada xididada leh dhaawaca gudaha iyo dibaddaba.
Haddii karootiga uu dareemo jilicsanaanta taabashada, waxaa jira dildilaacyo, raadadka cayayaanka, ama maqaarka si xun u jeexay - waa in lagu keydiyaa siyaabo kale: cusbo, qallalan qallajiye ama qaboojis.
Fasalkee ayuu dooran karaa?
Wixii kaydinta oo kaliya noocyo goor dambe ee dabacasaha waxaa loo isticmaalaa.kuwaas oo la nadiifiyey ka dib markii uu baraf ugu horeysay: qiyaastii, laga soo bilaabo bartamihii September ilaa bartamihii October:
DAREEN: Waqtiga kaydinta ee dalagga xididku kuma xirna kaliya oo kala duwanaanta, qaangaarka iyo xaaladda dhismaha, laakiin sidoo kale on dareenka of dabacasaha si ay ka kooban tahay ciidda.
Tusaale ahaan on khudradda loam ah koraan si dhakhso ahna u bislaadaanka badan noocyo isku mid ah koray on carradu culus (dhoobo, dhoobo culus)
Hababka kaydinta ee Maqsin
Habka ugu badan ee lagu keydiyo dabacasaha xilliga jiilaalka waa maqnaashaha ama dhulka hoose ee dhismaha. Meelahaas oo kale heerkulka joogtada ah (+ 2 ° C ama -2 ° C) iyo qoyaan badan ayaa la hayaa. Laakiin haddii heerkulku uu bilaabo inuu isbedbeddelo ama qoyaanku uu ka yaraado 90-95%, shuruudaha kaydinta waxay noqdaan kuwo aan fiicneyn. Sidaa darteed, tilmaamyadani waxay u baahan yihiin inay si joogta ah ula socdaan oo u ilaaliyaan
Wixii kaydinta muddada dheer ee karootada ee Maqsin, habab badan oo dhowr ah ayaa loo isticmaalaa.taas oo u oggolaanaysa in ay hayso heerkulka joogtada ah iyo heerka qoyaanka. Dooro habka diyaarinta iyo kaydinta ku habboon.
In sanduuqa webiga ee sanduuqa
Caanaha caadiga ah ee webiyada ayaa si fiican u ilaaliya qoyaanka iyo hawada hawada, sidaas awgeed khudradda lama daboolo caaryaal waxayna joogaan xaalado raaxo leh. Sand waa in lagu shubaa sanduuq pre-la qalajiyey oo lagu dhigay layers: lakabka dabacasaha, lakabka ah ee ciid. Khudaarta cagaaran waa inaanay xidhiidh la wadaagin.
Sanduuqa u soo qaado si sax ah. Si aad tan u samaysid, ku rid gacanta cantoobo gacantaada, si tartiib ah u cadaadi, ka dibna fur furkaaga. Haddii ciidku uu burburay, waa mid aad u qalalan, haddii uu jejebiyay buro, dareemo bilaash ah inaad u isticmaasho ujeedooyinkaaga.
Daawo fiidiyowga ku saabsan kaydinta karootada ee ciidda webiga:
In sida balka
Haddii aysan jirin ciid, laakiin waxaa jira balka cusbada qalalan, waxaa kale oo loo isticmaali karaa in lagu abuuro shuruudaha kaydinta ku habboon. Iyadoo ay sabab u tahay walxaha dabiiciga ah ee ay ka kooban yihiin, dhaddayku uma oggolaanayo in jeermisyada ay dacaayadiyaan ayna ka hortagaan khudradda cagaarka. Dalagyada rootiga waxaa lagu shubaa dhaddayda lakabyada iyo si aanay u taaban midba midka kale.
In sanduuq alwaax ah
Uma isticmaali kartid kala duwanaansho kala duwan, sida balka, sand ama duug leh, laakiin qaado sanduuqyada ama sanduuqyada kartoonada leh daboolka oo ku rid Maqii fogaan 10-15 cm derbiyada (haddii aad u dhowdahay, qoyaanka ka soo baxa derbiyada qoyan waxay geli karaan sanduuqyada). Sanduuqyada waxay u baahan yihiin in la dhigo meel yar oo dabool leh.
20 kg oo karooti ah ayaa la gelin karaa hal sanduuq. Waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo hubiyo xaalad khudradeed oo dib u celiso.
Chalk wuxuu leeyahay guryaha alkaline-ka mana ogolaanayo in jeermisyada la dhufto.sidaas darteed waa ku fiican tahay kaydinta karootada. Si loo abuuro xal chalky, jeeso (200 g 10kg oo khudaar ah) waa in lagu qasiqiyaa biyo, kicin ilaa qoyaan iyo dhadhan walxo kasta. Taas ka dib, xididada waa la qalajiyey waxaana loo diraa Maqsin.
In qolof dhoobo ah
Tani waa hab wasakh ah, laakiin wax ku ool: ka hor inta aan loo dirin dalagyada xididka ah ee kaydinta, dabacasaha waxaa lagu rusheeyaa tiro ballaaran oo ah dhoobo iyo biyo. Cawsku waa inuu si buuxda u daboolaa qudaar kasta.
Ka dib markii uu qallajiyo, karootada waxaa la dhigaa sanduuqyada waxaana loo diraa Maqsin.
Baakadaha caadiga ah
Bacaha bacaha ma ahan xalka ugu fiican, laakiin haddii aanad lahayn balka, caleenta, ama jilciso dhoobo, waad isku dayi kartaa. Waxa ugu muhiimsan waa wax walba oo sax ah: khudaarta cagaarka ah oo la qalajiyey, waxaa la geliyaa bacaha, waxaana la dhigaa meel hoose.
Qeybta hoose ee bacaha waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto godad kaas oo cufnaanta ay socon doonto. Looma baahna inaad xirto bacaha. Halkii laga heli lahaa gaaska polyetylen waa la isticmaali karaa iyo bacaha duuban.
Sidee loo dhigaa karootada bangiyada?
Badbaadi karootada Maqsinka ee foomka cayriimuhu ma aha oo kaliya sanduuqyada, laakiin sidoo kale bangiyada, tusaale ahaan, 5 ama 3 litir. Si arrintan loo sameeyo, marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso bangiyada: dhaqo oo si fiican u qalaji. Waxaa lagula talinayaa ma aha inaad ku dhaqdo saabuunta, laakiin karkari, sida kahor ilaalinta.
Karootiga diyaarka ah waxaa loo dhigayaa si aan caadi aheyn sidaa darteedna waxaa jira masaafo yar oo u dhaxeysa miraha. In ubbaad, waxaad gelin kartaa xidid malayga yar ama kula saydhaa leh balka bacriminta. Bangiyada waxay u baahan yihiin in la dhigo maqaasiinka, daboolka ma xirna. Waxaa jira dhowr siyaabood.
Wixii habkan, waxaad u baahan tahay milixda caadiga ah iyo xayrta. Shabaggeedii karootada on hayso, aan dhab ahayn iyo meel barmiil nadiif ah (of mug kasta), ku rushaysaa milix ee layers. Diyaarinta noocan ah waxaa lagu keydiyaa qaboojiyaha ilaa 6 bilood. Laakiin suxuunta taas oo markaa la isticmaali doono lama cusbayn, haddii kale cuntada ayaa cusbada cusbada.
Haddii aad haysato qaboojiyaha xabadka weyn ee banaan, wuxuu ku fiican yahay kaydinta karootada. Si arrintan loo sameeyo, xididdada marka hore waxay u baahan yihiin in si fiican loo maydho, la qalajiyey iyo diiray, gooyaa galay baararka iyo ku rid weel qalalan. Weelasha la buuxiyey ayaa loo diraa barafeeyaha, halkaas oo lagu kaydin karo dhawr bilood.
Jarooyinka waxay ku kaydin karaan oo keliya karootada cusub ama la kariyay, laakiin sidoo kale waa la qalajiyey. Si arrintan loo sameeyo, khudradda asalka ah waxaa lagu xoqay haraasad aan qalafsaneyn oo la qalajiyey (qallajiye gaar ah, foorno ama qorraxda).
Markaas banaanbaha waxaa lagu dhejiyaa dhalooyinka ku jira, xiran leh daboolka.
Fiiri fiidiyowga ku keydinta karootada ee foomka la qalajiyey:
Iyada oo toonta iyo kariimka
Tani ma aha oo kaliya habka kaydinta, laakiin waa la karinayo. Karootada waa la diiray, jarjar xabadaha, loo qaybiyey gasacadaha iyo buuxiyey marinade kulul (xawaashka isku dhafan biyo karkariyo, saliidda cuntada, cusbada, sonkorta).
Jidka oo dhan, toon, khardal iyo miro nafaqo ayaa lagu daraa dhalooyinka.. Bangiyadu waxay isku ururaan, qaboojiyaan oo waxay tagaan Maqsin ama balakoonka loogu talagalay kaydinta muddada dheer.
Haddii ay dhacdo in aad wax kasta oo sax ah sameysey, laakiin karootiga wali wuxuu bilaabmaa qallayl oo uu ku daboolaa caaryada, isla markiiba qaado talaabooyinka soo socda:
Tixgeli khudaarta kale, gaar ahaan haddii dabacasaha lagu keydiyo xididdo, haddii ay sidoo kale bilaabeen in la jeexjeexo, macnaheedu waa in dhammaan qaybta hoose ee infekshanku ku dhaco, waa in lagu daaweeyaa laalaab ama miirsan.
Hubi in hawo ku filan ay galaan bangiyada / sanduuqyada / boorsooyinka.
Hubi haddii ay jirto meel ku filan oo u dhaxeysa xididada.
Cabbirta heerkulka iyo qoyaanka, laga yaabo inay jirto isbedel.
TALO: Ha ka tagin dabacasaha dhalooyinka ama sanduuqyada isdhaafsan, si taxaddar leh u fiirso wax kasta oo dooro khudradda xidideysan ee la burburiyo. Khudaarta haray waa in la baaraandegaa soosaarta basasha oo si fiican loo qalajiyey.
Miyeydaan helin hab ku habboon adiga nafsad ahaantiisa? Waxaan kugula talineynaa inaad barato meelaha kale ee kaydinta suurtagalka ah ee karootada:
Hababka kaydinta iyo farsamada ilaalinta guriga.
Sidoo kale faa'iido leh waxay noqon doontaa waxyaabaha ku saabsan sida loo saxo xididka.
Si karootada si fiican loo ilaaliyo, waa inaad raacdaa xeerarka qaarkood.:
U hubso inaad dib u eegto kaydkaaga dhamaadka xilliga qaboobaha marka heerkulka Maqalka ama balakoonka uu si isdaba joog ah u bedelo.
Ka hor inta aan la kaydin, khudaarta waa in lagu maydhaa biyo biyo ah si ay yaraanta sheyga ugu yar ee suurtogalka ah u sii ahaato.
Ka hor inta aan lagu qalajin karootada qalajiyaha ama foornada, waa in la jaraa. Tani waxay ilaalin doontaa midabkiisa iyo qadarka qiimaha qiimaha leh ee ka kooban hal-abuurka.
Kuwa haysta qadar yar oo karootiga ah oo aan haysan meel ballaadhan oo lagu keydiyo, dhalooyinka dhaladu waa habka ugu fiican. In 3-litir barmiil, xididada waxaa si fiican loo dhawray. Waxa ugu muhiimsan waa in la abuuro shuruudo lagu keydiyo oo loogu talagalay iyaga oo aan isku qasin miraha la jaray. Karootada leh cillado kala duwan ayaa la qalaji karaa, la qaado ama la kariyaa, diyaarinta diyaargarasyo ​​dhadhan leh iyo nafaqo leh jiilaalka.